MR MRT: ဆေးလိပ် နှင့် ကျန်မာရေး နှင့် အခြားအရာများ နှင့် ကျန်မာရေး
ဆေးလိပ် နှင့် ကျန်မာရေး နှင့် အခြားအရာများ နှင့် ကျန်မာရေး
ဒကာ။ ။ "လပြည့်နေ့ မနေ့က လာကန်တော့ဖို့ . . . . .။ တစ်နေကုန် လျှောက်သွားနေတာနဲ့ ဒီနေ့မှ လာရတော့တယ်။"
ဆရာ။ ။ "အင်း။ ဟုတ်ပါပြီ။"
ဒကာ။ ။ "ဒါနဲ့ . . . တပည့်တော် တစ်ခု စဉ်းစာမိလို့ . . .။ တရားထိုင်ရင် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ပြုတယ်ဆိုတာ ဟုတ်သလား ဘုရား။"
ဆရာ။ ။ "အထောက်အကူ ပြုမပြု သိရအောင် လက်တွေ့ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ့လား။"
ဒကာ။ ။ "မှန်ပါ။ ခုဟာက လွယ်လွယ်မေးကြည့်တာ . . .။ စာပေအရ သီအိုရီအရ ဘယ်လိုလဲ သိချင်လို့ . . .။"
ဆရာ။ ။ "ဟုတ်လောက်ပါတယ်။ တရားထိုင်တာဖြစ်ဖြစ် ဘာဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတဲ့အလုပ်မှန်သမျှ ကျန်းမားရေးကို အထောက်အကူပြုမှာပါ။ မကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေကတော့ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှာပဲ။
ဒကာ။ ။ "ဘယ်လိုလဲ ဘုရား . . .။"
ဆရာ။ ။ "ဆေးလိပ်သောက်၊ အရက်သောက်၊ ဖဲရိုက်၊ မိန်းမပွေ။ အဲဒီလို မကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေ ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်ဘူးလား။"
ဒကာ။ ။ "မှန်ပါ။"
ဆရာ။ ။ "ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေ၊ ကုသိုလ်တွေကလည်း ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုနိုင်တာပဲ။ ကျန်းမာရေး ဆိုတာက ကံ-စိတ်-ဥတု-အာဟာရရဲ့ အောက်မှာ။ ကံနဲ့စိတ်မှာ ကုသိုလ် အကုသိုလ်တွေ ပါတယ်။
ဒကာ။ ။ "နည်းနည်းတော့ ရိပ်မိသလိုပဲ ဘုရား။"
ဆရာ။ ။ "ဒါကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သဘောတရားပိုင်း။ တရားထိုင်နေချိန်မှာ အဆုပ်က ဘယ်လို၊ ဦးနှောက်က ဘယ်လို၊ သွေးလည်ပတ်မှုကဘယ်လို . . . ဆိုပြီး သိပ္ပံနည်းကျ ကျန်းမာရေး ဖြစ်စဉ်တွေ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေတော့ ရှင်းမပြတတ်ဘူး။ "
ဒကာ။ ။ "မှန်ပါ။ ဒီလောက်ဆို ရပါပြီဘုရား။ သိပ္ပံနည်းကျ ရှင်းပြရင်လည်း တပည့်တော် နားလည်မှာ မဟုတ်ဘူး ဘုရား။"
Posted by Ashin Acara. at 8:31 PM